January 2018 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကင်ဆာ၏ တရားခံကြီးများ ကင်ဆာဆရာဝန်ဘဝမှာ ခဏခဏအမေးခံရသည့် မေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ “ဘာဖြစ်လို့ ကင်ဆာ ဖြစ်ရတာလဲ ဆရာ´´ ဆိုသည့်မေးခွန်း။ ထိုမေးခွန်းကို အပြည့်အစုံဖြေရမည်ဆိုရင် စာအုပ်အထူကြီးတွေ အများကြီးထွက်သွားမည်။ ဘယ်လိုနည်းနှင့်မှ ပြည့်စုံအောင် ဖြေနိုင်မည် မဟုတ်သည့် မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းတွေက များလှသည်။…
‘တစ်သားမွေး တစ်သွေးလှစေဖို့’ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သားဖွားပြီးချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီပြောင်းလဲမှုတွေကဘယ်လိုအရာတွေလဲ? ဒါတွေကို မေမေတို့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ? ဆိုတာကို အချက် (၆)ချက်နဲ့ လေ့လာကြည့်စေချင်ပါတယ်။ (၁)ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဝဖြိုးလာခြင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မိခင်လောင်းတွေဟာ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ နည်းကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ ပုခုံးသားတွေ…
ရာသီဓမ္မတာနဲ့ပတ်သတ်သော အယူအဆမှားများ ရာသီဓမ္မတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သင်အပါအဝင် လူအများစု ယုံကြည်ထားကြတဲ့ အယူအဆလေးတွေ မှန်/မမှန် ကြည့်လိုက်ကြရအောင်……. (1)ရာသီလာနေစဉ် ခေါင်းမလျှော်ရဘူး ဆေးပညာမှာတော့ ရာသီလာနေတုန်း ခေါင်းမလျှော်ရဘူးလို့ မညွှန်ကြားထားပါဘူး။ ခေါင်းလျှော်ခြင်းဟာ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ရာသီလာနေချိန်ဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားအချိန်ဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းလျှော်လို့ရပါတယ်။ (2)ရာသီလာနေစဉ်လက်ဖက်မစားရဘူး။…
စိတ်မချရသော သန္ဓေတားနည်းများ သန္ဓေတားနည်းများစွာရှိတဲ့ထဲမှာမှ အချို့သော သန္ဓေတားနည်းတွေဟာ စိတ်မချရဘဲ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေအလွန်များပါတယ်။ ဒီလိုသန္ဓေတားနည်းတွေကို မသိလိုက်ဘဲ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးလိုက်မိမယ်ဆိုရင် မမျှော်လင့်ဘဲကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်တာကြောင့် ဒီလိုနည်းလမ်းတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်အောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (1)မိန်းမကိုယ်ပြင်ပသုတ်လွှတ်ခြင်း မိန်းမကိုယ်ပြင်ပသုတ်လွှတ်ခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ရသွားနိုင်ချေအများဆုံးသန္ဓေတားနည်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သုတ်ပိုးဟာ ဆန္ဒပြီးမြောက်ချိန်မှာထွက်တဲ့ သုတ်ရည်ထဲမှာတင်မကဘဲ အစောပိုင်းထွက်တဲ့ ရှေ့ပြေးအရည်ကြည်တွေထဲမှာပါ…
အမျိုးသမီးနှင့် မီးယပ်ရောဂါ အရွယ်ရောက်ပြီးသားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာ ဆီးပူဆီးကျင်တာ ၊ မိန်းမကိုယ်ကနေ အဖြူဆင်းတာ၊ ရာသီချိန်မဟုတ်ဘဲ သွေးပေါ်တာ၊ ဆီးစပ်အောင့်တာ၊ ဗိုက်အောင့်တာ စသဖြင့် ကြုံလေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲဒါဟာ မျိုးပွားအင်္ဂါကနေတစ်ဆင့်ရောဂါပိုးဝင်ကူးစက်တဲ့ Pelvic Inflammatory Disease လို့ခေါ်တဲ့မီးယပ်ရောဂါတစ်မျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ PID ရောဂါဟာ…
ဒေါက်တာစု နှင့်တီတီတာတာလေးများ (၂) ရက်တစ်ရာ ကြက်ညှာချောင်း ဒေါက်တာစု တစ်ယောက် ဆေးခန်းရောက်ပြီးသိပ်မကြာမှီ ဆေးခန်းရှေ့အိမ်က ဒေါ်မြ တစ်ယောက် သူ့သမီး သဲသဲ လက်ကလေးဆွဲကာ ဆေးခန်းရောက်လာသည် သဲသဲကို ကြည့်လိုက်တော့ ချောင်းဆိုးနေသည်မှာ ဆေးခန်းဝင်စကထဲက ခုထိ တစ်ချက်မနား ဆိုးလိုက်သည့်…
ဒေါက်တာစုနှင့် တီတီတာတာလေးများ(၁) “အိပ်ရာထဲ သေးပေါက်တတ်သောကလေး” ဆေးခန်း ပိတ်ခါနီး အချိန်လောက် လူလတ်ပိုင်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ၃ နှစ်အရွယ်ကလေးလေး လက်ဆွဲကာ ဆေးခန်းထဲသို့ဝင်လာသည် အမေကို ကြည့်ရတာ စိတ်ညစ်နေပုံ၊ ကလေးကြည့်တော့လဲ လန်းလန်းဆန်းဆန်း။ ဖျားနာ သည့်ပုံ လုံးဝမပေါ် ၊…
ဒေါက်တာစုနှင့် တီတီတာတာလေးများ (၃) ဝဲ ဆိုတာ ချိုနဲ့လား? သားသား လက်ကြားက အရမ်းယားနေတယ်၊ ညဘက်ဆို ပိုယားတယ် သားထွေးတစ်ယောက် ဆေးခန်းရှိ စမ်းသပ်ကုတင်ပေါ်ရောက်သည်နှင့် ဒေါက်တာစုကို ပြောနေတော့သည်၊ “သားသားရေ ခြေထောက်ကြားရော ယားဘူးလား? အရေကြည်ဖုလေးတွေရောထွက်ဘူးလား? ဆရာမကို ပြကြည့်ပါဦး”…
Bulimia Nervosa (Binge Eating Disorder)
အစားအသောက်မူမမှန်သော စိတ်ရောဂါများ (အပိုင်း ၃) (၂) အစားအစာ လွန်ကြူးစွာ စားသုံးခြင်း (Bulimia nervosa) လူအယောက် တစ်ရာတွင် ၁-၂ ယောက်ခန့်တွင် တွေ့ရတတ်ပြီး သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များပါသည်။ တွေ့ရတတ်သော လက္ခဏာများ အစားအစာများများကို အချိန်တို…
အစားအသောက် မူမမှန်သော စိတ်ရောဂါများ(အပိုင်း ၂) (၁) အစာစားလိုစိတ် မရှိခြင်း(Anorexia nervosa) လူ ၁၀,၀၀၀ တွင် ၂ ယောက်မှ ၄ ယောက်ခန့်ဖြစ်တတ်ပြီး အမျိုးသမီးများတွင် အတွေ့များသောရောဂါ ဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်မှစ၍ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ အများအားဖြင့်…